भिडियो – Dainik Samchar
काठमाडौं – लोकदोहोरी गायिका दिलमाया सुनार मृ,त भेटिएकी छिन् । काठमाडौंको तारकेश्वर-११ नेपालटारस्थित डेरामा उनी शनिबार बिहान मृ,त भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस स्टाटसमा आफूले नै यो कदम चालेको र कसैलाई दोष नदिन अनुरोधसमेत गरिएको छ, तर स्टाटसभन्दा घटना प्रकृति निकै फरक रहेको र आ त्मह’ त्या जस्तो नदेखिएको अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकृतको भनाइ छ । शुक्रबार राति दिलमायाले फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै आफूलाई बाँच्न गाह्रो भएको उल्लेख गरेकी थिइन् । त्यसमा उनले आफ्नो मृ,त्युमा कसैलाई दोष नदिनु भनेकी छन् । यस्तो छ उनले लेखेको नोट नमस्कार सबै जनामा मिठो सम्झना छ । जिन्दगीमा उचारचढाव धेरै भोगेँ । तर जब म जान्ने भए अनि म एक्लो भएँ । कसैको माया माया पाउन जति कोसिस गरे पनि सकिनँ । तर पनि हार खाइनँ । तर ऐले धेरै गाह्रो भयो । म बाचेर पनि दिनदिनै म,र्न सकिनँ । आमा तिम्री छोरी धेरै थाकिछे
दाेहाेरी गायिका मृ”तक दिलमाया सुनारकाे घरबेटीले गरे यस्तो खुलासा,संसार छाड्नु अघि यस्तो भनेकि रहेछिन् ( भिडियो सहित )
काठमाडौं – दोहोरी गायिका दिलमाया सुनार मृ”त भेटिएकी छन् । प्र”हरीका अनुसार शनिबार राति ११ बजे काठमाडौंस्थित आफ्नै डेरामा उनी मृ”त्य अवस्थामा भेटिएकी हुन् । सुर्खेत घर भएकी ३० वर्षीया गायिका सुनार काठमाडौंको नेपालटारमा डेरामा बस्दै आएकी थिइन् । उनले शुक्रबार आफू बाँच्न मुस्किल भएको भन्दै सामाजिक संजाल फेसबुकमा स्टाटससमेत लेखेकी थिइन् । प्र”हरीले घ”टना अनुसन्धानका क्रममा सूर्य श्रेष्ठलाईलाई प”क्राउ गरेको छ । प्र”हरीका अनुसार शूर्य शनिबार बिहानै मृ”तक सुनारको कोठामा पुगेको थाहा भएको छ । प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । राष्ट्रिय दोहोरीगीत प्रतियोगितामा उत्कृष्ट गायिका दिलमाया सुनार मृ”त अवस्थामा फेला परेकी छिन् । यस्तो छ गायिका सुनारको सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको सु’साइड नोटः नमस्कार सबै जनामा र सबैलाई मिठो सम्झना छ । यो जिन्दगिको उतावचढाव धेरै भोगेँ तर जब म जान्ने भएँ अनि म
निस्किए; सचिनलाई पढाउने शिक्षक आ`क्रोश,नखुलेको कुरा खुलाए (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं – पछिल्लो समय मा सामाजिक संजाल मा एक तातिएको नाम हो सचिन परियार। उनि सानै उमेरमा कला कारिता क्षेत्रमा एक थिए तर अहिले उनि हराएका छन्। मिडिया कै कारण उनि कलाकारिता क्षॆत्र मा पुगेका र अहिले बाटोमा माग्दै हिडेको अबस्था मा देख्न सकिन्छ। मिडिया कै कारण सचिन काठमाडौँ को नं -१ बोर्डिंग स्कुलमा फ्री मा पढ्न पाएका थिए। मिडिया कै कारण कृष्ण कंडेल को सहायताले उनले फ्रीमा पढ्न पाएका थिए. अहिले सचिन बाटो मा माग्दि हिनेपछि सबै दर्शकहरुले मिडियाले उच्याल्यो र पछ्यार्यो भने पछि यसको बास्तबिकता बुझ्न मिडियाकर्मी यो बिसयमा चासो भएको हो। सचिन ले पढ्न स्कुलमा जादा सचिन ६ महिना देखि स्कुल नगएको र उनको बुबाले नै स्कुल बाट अनेक बहाना बनाएर स्कुलबाट लागेका रहेछन। सचिन परियार किन माग्दै हिडेका छन् ? सचिनका बुबा तेजेन्द्रको स्कुलमै दादागिरी।पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।
काठमाडौं – पछिल्लो समय मा सामाजिक संजाल मा एक तातिएको नाम हो सचिन परियार। उनि सानै उमेरमा कला कारिता क्षेत्रमा एक थिए तर अहिले उनि हराएका छन्। मिडिया कै कारण उनि कलाकारिता क्षॆत्र मा पुगेका र अहिले बाटोमा माग्दै हिडेको अबस्था मा देख्न सकिन्छ। मिडिया कै कारण सचिन काठमाडौँ को नं -१ बोर्डिंग स्कुलमा फ्री मा पढ्न पाएका थिए। मिडिया कै कारण कृष्ण कंडेल को सहायताले उनले फ्रीमा पढ्न पाएका थिए. अहिले सचिन बाटो मा माग्दि हिनेपछि सबै दर्शकहरुले मिडियाले उच्याल्यो र पछ्यार्यो भने पछि यसको बास्तबिकता बुझ्न मिडियाकर्मी यो बिसयमा चासो भएको हो। सचिन ले पढ्न स्कुलमा जादा सचिन ६ महिना देखि स्कुल नगएको र उनको बुबाले नै स्कुल बाट अनेक बहाना बनाएर स्कुलबाट लागेका रहेछन। सचिन परियार किन माग्दै हिडेका छन् ? सचिनका बुबा तेजेन्द्रको स्कुलमै दादागिरी। पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।
लाहानका अस्पातलका एक कर्मचारीले सेवा ग्राहीलाई जथाभावी गाली गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए पछि यतिबेला उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। लहान अस्पतालका सरकारी कर्मचारी द्वारा अस्पतालमा पुगेका सेवाग्राही सँग अभद्र व्यवहा गरिएको छ। विभिन्न उदेश्यले अस्पतालमा पुगेका सेवाग्राही सँग अस्पतालका कर्मचारीले छाडा बोली अभद्र व्यवहार गरेको हो। जनताको कर पसिनाले तलव भत्ता खाइरहेका सरकारी कर्मारीहरुले जनतालाईनै अभद्र व्यवहार गरेपछि स्थानीय र सेवाग्राहीहरु आक्रोसित बनेका थिए । आक्रोसित सेवाग्राही र कर्मचारी बीच भनाभन भएपछि त्यहाको माहोल अस्तव्यस्त भएको थियो l लहानको उक्त अस्पतालमा यो घटना कुनै पहिलो घटना भने पक्कै होइन l यसअघि पनि अस्पतालका विभिन्न् कर्मचारीहरु द्वारा अस्पताल पुगेका सेवाग्राहीहरु सँग अभद्र व्यवहार गरेको समेत पाइएको छ l अस्पतालका केही कर्मचारी द्वारा सेवाग्राही सँग यसरी आ
यूएईका राजकुमार शेखले दुर्गा प्रसाईलाई दिएको लौरोबारे यस्तो रहस्य बाहिरियो, जुन लौरो ति राजकुमारका बाबुले मर्नुअघि छोरालाई सम्झना स्वरुप दिएका रहेछन्, हेर्नुहोस् भिडियो काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)का राजकुमार शेख मोहम्मद माक्तुम जुमा ला माक्तुमले मेडिकल व्यवसायी तथा एमाले केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईंलाई उपहार दिएको ‘सुनको लौरो’ले यतिबेला नेपालमा हलचल मच्चाएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख महेशकुमार भट्टराईले राजकुमार जुमाले सुनको लौरो ल्याएकोबारे भन्सार कार्यालय अनभिज्ञ रहेको बताएको उक्त लौरो दुर्गा प्रसाईंले सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आँफु तयार रहेको बताइरहेका बेला उनले कार्यक्रम द प्रकाश सुवेदी शोमा उक्त सुनको लौरोको रहस्य खोल्दै आँफुले उक्त झोला नै नखोलेको र काठमाडौँबाट फर्किए लगत्तै हेर्ने समेत बताएका छन् । दुबईका राज परिवारका सदस्यल
अन्तरजातीय प्रेम बिबाह गरेका टिकटक भाईरल जोड़ी एक महिना मै करोडपति (भिडियो सहित)
श्रेष्ठकी छाेरी विश्वकर्मा सँग प्टम बिबाह गरेर आएकी संगीता श्रीमानको मायामा यति वेला रमाइरहेकी छिन्। बिबाह पछि माइती सँग त्यति सम्पर्कमा नरहेको कारण संगीता निकै भावुक हुँदै माइतीलाई यसरी सन्देश पठाएकी छिन्,’ हजुरहरुको मनमा लाग्छ होला छाेरी सनो जातमा गयो भनेर तर जस्ति जातमा गए पनि म खुसी नै छु।’ ‘अब आफ्नै जातमा गएको भए पनि दुःख पाएको थिएँ भने त्यहाँ तपाईंहरूलाई नैं नराम्रो हुन्थ्यो होला तर म सानै जात सँग आये पनि परिवारको साथ अनि स्पोर्ट रहेको छ क्दुमै खुसी छ मलाई। तपाईहरुको ज्वाईले पनि राम्रो गर्नु भयेको छ अनि घर परिवारले पनि साथ दिनु भएको छ त्यसैले मेरो चिन्ता लिनु पर्दैन।’ धेरै काम अनी सङ्घर्ष गर्दा असफल भए पछि यो जोडी काम मै खोजीमा काठमाडौं आए पछि सामान्य खर्च समेत नरहेको उक्त जोडीले झन्डै आधा करोडको व्यवसाय गरिसकेका छन्। जातकै कारण ससुराली जान नपाएको रमेशले भने यो कुरालाई सामान्य
बालेन कलाकार पाँडेको गाउँ पुगेर रित्तै हात फर्किए,पाँडेले स्थानीयलाई यसरी सम्झाएको छ । सम्पूर्ण कुरा भिडियो मा समाबेश गरिएको छ । फोहर व्यवस्थापनमा अबरोध गर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता श्रीराम ढुंगानासहितका ११ जना पक्राउ परेका छन । सोमबार सहरी विकास मन्त्रालयमा सरोकारवाला जनप्रतिनिधिहरूको रोहबरमा भएको सहमति अनुसार मंगलबार बिहानै फोहोर बोकेर बञ्चरेडाँडा पुगेका सवारीसाधान नेपाली कांग्रेसका नेता ढुंगानाको नेतृत्वमा रोकिएको थियो । प्रहरीले केहीबेरअघि श्रीरामसहितका ११ जना व्यक्तिलाइ नियन्त्रणमा लिएको स्थानीय हरिहर ढुंगानाले जानकारी दिएका छन । यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह र उपप्रमुख सुनिता डंगोलसहितको टोली सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा पुगेको दिननै कांग्रेस नेता ढुंगानाले फोहोर व्यवस्थापनमा अबरोध गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले आफू पनि यही ठाउँमा जन्मिएको मान्छे भएकाले फोहर व्य
जेठ १९ गते जुन दिन दरबार हत्या काण्ड भएको थियो। त्यो दिन सबै तिर खुसीयाली आउँछ भन्ने धेरैको आसा रहेको थियो। तर त्यो आस सबै निरासा मा परिणत भएको छ। जिल्ला अदालत तनहुँ र नवपरासी दुवै जिल्ला अदालतले गरेको फैसला लाईनै सदर गर्दै उच्च अदालत पोखराले कारागार चलान गर्न आदेश दिएसँगै नायक पल साह अदालतबाट रुँदै निस्किए। पल साहका वकिलले माग गरेका ,धरौटीमा रिहा अथवा तारिखमा रिहा भै मुदा लड्ने कुरालाई समेत व्यवस्था गरी उच्च अदालत पोखराले कारागार चलान गर्न आदेश दिएको छ। जबरजस्ती करणीको आरोपमा पक्राउ परेका अभिनेता पल शाह ९पूर्णविक्रम शाह० लाई उच्च अदालत पोखराले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय उज्वल शुक्ल र श्रीधराकुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले शाहलाई पुर्पक्षका लाथि थुनामा पठाउने तनहुँ अदालतकै फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पोखराका उपरजिस्टार तथा सूचना अधिकारी व
मेरो पनि गो’प्य ठाउमा कत्तिले समाए भन्दै जंगिए सर्मिला वाईबा, डुब्ने भएपछी भिक्षु फकाइयो
सामाजिक अभियन्ता शर्मिला वाईबाको नेतृत्वमा यतिबेला पल शाहको रि’हाईको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा ठुलो जु लुस पश्चात् मिडियामा आएकी छिन्। उनी पल शाह थु नामा परे देखि नै लगातार पल को पक्षमा नि’रन्तर बह’स देखि लिएर आ’न्दोल न गरिरहेकी छिन् विगत केही महिना देखि। उनी यसो भन्छिन्,’ पलको लागि हामीले यो आ न्दो लन यस्तो तरिकाले तातिरहेको छ धेरैं भन्दा धेरै युवाहरू अहिले हामी माझ जोडिन पुग्नु भएको छ र सबैको एउटै आवाज रहेको छ अहिले की पल शाह छिटो भन्दा छिटो रिहाई हुनु पर्यो भन्ने त्यसैले अब हामी पछाडी हट्ने छैनौ।’ त्यस्तै शर्मिला वाईबाका अनुसार पल शाहको अहिले रहेको वकिलले निकै नै ढिलाई गरिरहेको हुनाले उनीहरूले अहिले पलको वकालत गर्नका निमित्त अर्कै अधिवक्ता सुरेन्द्र पौडे ललाई झि’काउने कुरा भइरहेको बताएकी छिन् । त्यस्तै शर्मिला वाइबाले सुरेन्द्र पौडेलले पलको वकालतका लागि लाग्ने खर्च सबै दिने भन